စမတ်ကျတယ်ဆိုတာ Looking good တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ခံယူချက်၊ ကိစ္စတစ်ခုအပေါ် ချဥ်းကပ်ပုံအစရှိသဖြင့် အခြားသောအကြောင်းအရာတွေလည်း အများကြီးရှိတတ်ပါသေးတယ်။
စမတ်မကျချင်တဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာမရှိပါဘူးနော်။ သင့်ရုပ်က ချောသည်ဖြစ်စေ၊ အသင့်အတင့်ပဲရှိသည်ဖြစ်စေ စမတ်ကျနေတယ်ဆိုရင် သင်ကအလိုလိုနေရင်းကို ကြည့်ကောင်းတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေမှာပါ။ ဒါဆို စမတ်ကျတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်မလဲ မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
ဒါက လူတိုင်းအတွက် လိုအပ်တဲ့အချက်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် စာဖတ်တယ်ဆိုတိုင်းလည်း တွေ့ကရာစာအုပ်တွေ ဖတ်လို့မရဘူးနော်။ စာပေအဆိပ်မသင့်စေမယ့်၊ သင့်အတွက် အကျိုးရှိမယ့် စာအုပ်တွေကိုရှာဖွေပါ။
၂။ လတ်တလောဖြစ်ရပ်များကို သိရှိနေပါစေ။
အခုတလော ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေ ရေပန်းစားနေလဲ၊ ကမ္ဘာ့အရေး၊ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အရေးမှာ ဘာတွေဖြစ်နေလဲကအစ ထည်ထည်ဝင်ဝင် သိရှိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၃။ အနုပညာကို ခံစားပါ။
ပြဇာတ်ရုံ၊ ရုပ်ရှင်ရုံ၊ ပန်းချီပြခန်း အစရှိတာတွေနဲ့ ရင်းနှီးထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အနုပညာကို ခံစားတတ်ရမယ်လို့ အတင်းကြီး မတိုက်တွန်းလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အနုပညာဆန်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က စမတ်ကျတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာပါ။
မတူညီတဲ့ဒေသတွေ၊ ကွဲပြားတဲ့ ယဥ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းတွေအကြောင်းကို သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် ခရီးသွားပါ။ အထူးသဖြင့် တစ်ယောက်တည်း အမှီအခိုကင်းကင်း ခရီးသွားတာက သင့်ကိုထက်မြက်ပြီး စမတ်ကျစေပါလိမ့်မယ်။
သင်နဲ့မဆိုင်တဲ့ အတင်းအဖျင်းကိစ္စတွေကို စိတ်ဝင်စားဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ သိထားသင့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို အမြဲတမ်းလေ့လာပြီး သင့်ထက်နားလည်တဲ့သူတွေ၊ စီနီယာတွေကို တတွတ်တွတ်နဲ့ မေးမြန်းနေပါ။
သင်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာ၊ ဝါသနာပါတဲ့ကိစ္စအတွက် ထပ်တလဲလဲ လေ့လာသင်ကြားနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါမှလည်း သင်က သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွေမှာ ထူးချွန်ပြီး စမတ်ကျတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာပါ။
၇။ စကားတစ်ခွန်းမပြောခင် ကြိုတင်စဥ်းစားပါ။
စကားတစ်ခွန်းကို ပြောတော့မယ်ဆိုရင် သင်ပြောမယ့်စကားက ဘယ်လိုအကျိုးရှိမလဲ? တစ်ဖက်သားအတွက်လား? သင့်အတွက်လား? နောက်ပြီး ဒီစကားက ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်မလဲ စဥ်းစားနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ သင်ကစမတ်ကျတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာပါ။
သင်က ဘယ်နေရာကို သွားမှာလဲ? ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးနဲ့ ဘယ်သူ့ကိုသွားတွေ့မှာလဲ?? အစရှိသဖြင့် သွားရောက်မယ့်နေရာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဗျူဟာကျကျ စဥ်းစားတွေးခေါ်ပြီး ဝတ်စားဆင်ယင်တတ်ပြီဆိုရင် သင်ကစမတ်ကျတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။
စမတ်ကျတယ်ဆိုတာ Looking good တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ခံယူချက်၊ ကိစ္စတစ်ခုအပေါ် ချဥ်းကပ်ပုံအစရှိသဖြင့် အခြားသောအကြောင်းအရာတွေလည်း အများကြီးရှိတတ်ပါသေးတယ်။ ဒီတော့ စမတ်ကျတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ရမယ်လို့ စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားသူတွေအတွက် အခုလိုပဲ အကျိုးရှိတာလေးတွေ မျှဝေလိုက်တာပါ။
Source: peacefuldumpling, inc